दाङ उवासंघमा तेतृत्वका लागि आज निर्वाचन - Ganatantra Online
दाङ उवासंघमा तेतृत्वका लागि आज निर्वाचन
घोराही, २०पुस । दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचनको सम्पुर्ण तयार पुरा भएको छ । आज सोमवार विहान ८ बजेदेखी बेलुकी पाँच बजेसम्म मतदान गर्ने समय तालिका रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक शिव प्रसाद घिमिरेका अनुसार निर्वाचनका लागी बुथ र आचारसहिंताको बारेमा अन्तिम सुचना जारी गरिएको छ ।
मतदानका लागी बुथ १ देखी ६ सम्म राख्ने तयारी गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमका बाबजुद पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउदै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । मतदानका लागी महिला, पुरुष र असाहाय र अपाङगताहरुको लागी छुट्टाछुट्टै लाईन बनाउने तयारी गरिएको छ ।
संघको आगामी नेतृत्वका लागी अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो । संघको २१ सदस्यिय कार्यसमिति मध्ये दुई पदमा मात्रै निर्वाचन हुन लागेको छ ।
संघको अध्यक्ष पदमा सयुक्त प्यानलबाट टंकसिंह बुढाथोकी र स्वतन्त्रबाट बसन्त जोशी उम्मेदवार बनेका छन् भने कोषाध्यक्षमा सयुक्त प्यानलबाट सुसील पोख्रेल र स्वतन्त्रबाट धनपति शर्मा उम्मेदवार रहेका छन् । अन्य पदमा सर्वसम्मत चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा चार हजार तीन सय ३८ मतदाता रहेका छन् ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुन लागेको छ । व्यवसायीक छाता संगठनमा नयाँ नेतृत्वमा अध्यक्ष पदका लागि टंकसिंह बुढाथोकी र बसन्त जोशिको उमेदवारी परेको छ । प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट बुढाथोकी र जोशिले स्वतन्त्रबाट उमेदवारी दिनुभएकोे छ । हामी दुबैजना अध्यक्षका प्रत्याशिलाई नयाँ नेतृत्वमा तपाईको उमेदवारी किन ? लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ । –सम्पादक
म आधिकारिक उम्मेदवार हो
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ
यहाँको उमेदवारी किन ?
धन्यवाद, सर्वप्रथम त यहाँ लगायत सम्पूर्ण पत्रिका परिवारलाई । मेरो उमेदवारी किन हो भनेपछि म दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध भएको लामो समय भयो । मैले यसभन्दा अघि पनि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा व्यवसायीका समस्यालाई नजिकबाट नियाल्ने कोशिस गरेको छु । पछिल्लो समय व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न आश्वासन पाउने तर कार्यान्वयनमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको प्रष्ट छ । मैले नेतृत्वमा आउन पाएपछि अहिले देखिएका व्यवसायीका विविध समस्यालाई समाधान गर्न लागि पर्ने छु । अहिले पनि म मुल जिम्मेवारीमा नभएपनि सहायक जिम्मेवारी पनि थुप्रै काम गरिरहेको छु ।
जित्ने आधारहरु के हुन ?
मैले निश्चित रुपमा जित्छु । अहिले मैले भन्नुपर्दा औपचारिकरुपमा घोषणा हुनमात्रै बाँकी छ । किनभने सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरु मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ । एउटै जुन प्रजातान्त्रिक प्यानलकै व्यक्ति बसन्त जिले स्वतन्त्ररुपमा उमेदवारी दिनुभएको छ । उहाँले स्वतन्त्ररुपमा उमेदवारी दर्ता गरेपनि मेरो पक्षमा साथ धेरै छ । पहिले पनि म नेतृत्वमा जाने र म पछि उहाँ नेतृत्वमा जाने पहिले सहमती भएको थियो तर अहिले आएर उहाँले उमेदवारी दिएर संगठनमाथि धोका दिनुभएको छ । तर उहाँले उमेदवारी दिएपनि मैले जित्छु भन्ने लागेको छ । सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरु मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ ।
व्यवसायीका मुद्धाहरु कसरी उठाउनुहुन्छ ?
मैले शुरुमा पनि भने, म विषेशत ः यस व्यवसायी संगठनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छु । मैले व्यवसायीका समस्यालाई विभिन्न तवरले समाधान गर्ने कोशिस गरेको छु । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सहयोगदेखि विभिन्न नितिगत बाधा अर्चनमा मैले समन्वय गर्ने गरेको छु । अहिले पनि भइरहेका विभिन्न समस्यालाई मैले आफ्नै समस्याको रुपमा लिएर समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेको छु । व्यवसायीको विभिन्न नितिगत अड्चनलाई समाधान गर्ने छु ।
जितेपछि काम के गर्नुहुन्छ ?
म विषेशत ः नेतृत्वमा पुग्ने वित्तिकै अहिले पनि विभिन्न किसिमका कर बुझाउन व्यवसायीलाई तुलसीपुर लगायत टाढा–टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ, यसका लागि म नेतृत्वमा आइसकेपछि व्यवसायीले कर बुझाउने देखि नयाँ व्यवसाय दर्ताका लागि टाढा–टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । विभिन्न समयमा हामीले व्यवसायीलाई सहजताका लागि व्यवसाय दर्तादेखि नविकरण सम्मका विभिन्न कार्यक्रम कार्यालयबाटै संचालन गर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि ति कामहरुलाई निरन्तरता दिनेछु । जसले गर्दा व्यवसायीलाई समय र रकमको बचत हुन सकोस् । त्यतिमात्र नभएर व्यवसायीसंग विभिन्न समयमा छलफलका माध्यमबाट समस्यालाई बुझ्ने कोसिश गर्ने छु भने ति समस्यालाई जतिसक्दो सहज किसिमले समाधान गर्नेछु ।
व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न त गाह्रो छ नि ?
हो, तपाईले भनेजस्तै भन्न र गर्न गाह्रो छ । धेरै कुरा गर्ने थोरै कुरा कार्यान्वयन हुने परम्परा अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा छ तर मैले ज ितगर्न सक्छु त्यति भनेको छु । झुटा आश्वसन दिने काम मबाट हँुदैन् । मैले जतिसक्दो धेरै कार्यान्वयन गर्ने कोशिस गर्नेछु । सकेसम्म अहिले हामीले प्रतिवद्धता थौरै भएपनि कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिवद्धता गर्ने छु ।
तपाहरु किन मिल्न सक्नुभएन् र निर्वाचन हुने अवस्थामा पुग्नुभयो ?
म आधिकारिक उमेदवार हो । उहाँको मेरो सम्झौता के भएको थियो भने एउटाले अध्यक्ष पाएपछि अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्ने बन्ने सहमति थियो तर उहाँले नियम उल्लंघन गर्नुभयो ।
मुल नेतृत्वमा नभएपनि सहायक जिम्मेवारीबाट अहिलेसम्म के के गर्नुभयो ?
मैले कोराना महामारीको समयमा व्यवसायीको हकहितको लागि विभिन्न काम गरेको छु, व्यवसायीक सचेतनादेखि विभिन्न कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई सहयोग गरेको छु । त्यसभन्दा पनि विभिन्न समस्या र गुनासालाई मैले सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउने कोशिस गरेको छु ।
म वास्तविक व्यवसायीहरुको उम्मेदवार हुँ
यहाँ उमेदवारी किन ?
मेरो उमेदवारी किन भनेपछि यहाँको राजनीतिक दलहरुले पहिला प्रजातान्त्रिक व्यवसायी संगठनलाई जिम्मा दिनुभयो । राजनीतिक दलले हस्तक्षेप नगर्ने र व्यवसायीक संगठनले यसको छनौट गर्छ भन्ने सहमति थियो । पछि व्यवसायीक संगठन जो मेरो प्रतिद्वन्दी उहाँहरु चाँही भेगिय ढंगले जानुभयो । उमेदवार छनौट गर्नुभन्दा पहिले शनिबार बिहानै मैले छलफल गरेको थिँए । मैले वरिष्ठता क्रम हेरेर सिनियरलाई माथि , जुनिएरलाई तल पारेर छनौट गर्नुहोला भनेको थिएँ तर उहाँहरुले त्यसो गर्नुभएन । मापदण्ड बनाएर सबैलाई चित्त बुझने गरी छनौट गर्नुहोला भनेर भनिएको थियो । उमेदवारी छनौटको लागि पार्टीभित्र पनि छलफल भयो । मैले वरिष्ठता क्रमलाई मिचेर उमेदवारी छनौट नगर्नुहोला भनेको थिएँ तर उहाँहरुले त्यसको ठिक विपरित उमेदवारी छनौट गर्नुभयो । त्यसकारण मैले चाँही स्वतन्त्र उमेदवारी दिएको हो । त्यो भन्दा पनि अझ विशेष गरी व्यवसायीको पूर्ण साथ र समर्थन पाएको हुँदा मैले उमेदवारी दिएको छु ।
जित्ने आधार मलाई व्यवसायीहरुले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरुको हौसला नै मेरो जित्ने आधार हो । म जहिले पनि व्यवसायीका हकहितको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे हुँ । त्यसकारण पनि व्यवसायीक साथ र सहयोग मलाई छ । धेरैले मलाई नेतृत्वमा पुगेको देख्न चाहनुभएको कारण मेरो उमेदवारी परेको हो । मलाई व्यवसायीले साथ दिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । म वास्तविक व्यवसायीहरुको उम्मेदवार हुँ ।
व्यवसायीका मुद्धाहरु के छन् ?
व्यवसायीका एजेन्डामा रहेर मैले काम गर्ने हो । म कुनै राजनीतिक दलको पछि लागेर काम गर्ने होइन्, मैले व्यवसायीका हकहितका पक्षमा काम गर्ने हो । जस्तै कोभिडको बेलामा तुलसीपुर पुगेर आयकर बुझाउने, फम दर्ता लगायतका काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी हामीले उद्योग वाणिज्य संघले सहज व्यवस्था गरिदिएको थियो । अहिले पनि फेरि ति कामलाई निरन्तरता दिने छु । अब म अध्यक्ष भइसकेपछि पहिलो काम के हुने छ भने आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुको शाखा वाणिज्य संघको मातहतमा घोराहीमै संचालन गर्ने र दोस्रो काममा नापतौलको शाखा कार्यालय घोराहीमा स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । अहिले पनि व्यवसायीलाई नापतौलका लागि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि व्यवसायीलाई कर शिक्षाको अभिमूखिकरण गर्ने योजना बनाएको छु । भ्याट बिल कसरी राख्ने, कसरी संचालन गर्ने, खरिद बिल कसरी राख्ने, बिक्रि विल कसरी राख्ने लगायतका विषयमा शिक्षा दिने योजना बनाएको छ ।
सहायक नेतृत्वमा रहेर अहिलेसम्म व्यवसायीका समस्या कति सम्बोधन गर्नुभयो ?
मैले यो बिचमा व्यवसायीका समस्या धेरै समाधान गर्ने कोशिस गरेको छु । म मुल नेतृत्वमा नभएपनि म कहाँ आएका व्यवसायीक मुद्धा समाधान गर्ने गरेको छु । एक पटक यसअघि पाँच सयको नयाँ नोट आएको समयमा विना कारण प्रहरीले व्यवसायी साथीलाई पक्राउ गरेपछि हामीले उहाँलाई छुटाएका थियौँ, उहाँ निर्दोस हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले पक्राउ गरेका कारण हामी व्यवसायीक संगठनको प्रयासले उहाँ छुट्नुभएको थियो । यि यस्ता धेरै काम गरेको छु , फेरि पनि गर्ने अवसर पाउनेछु भन्नेमा विश्वस्त छु ।